को होला वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी ? : RajdhaniDaily.com
HomeEditor-Picksको होला वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी ?
पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको पाँचौ पोखरा स्पार्टस् अवार्ड–२०७६/७७ को वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी (पुरुष) विधामा ३ खेलाडी मनोयनमा परेका छन् । करातेका नवीन रसाइली, टेबल टेनिसका विनेश खनियाँ र फुटबलका सुमन अर्याल मनोनयनमा परेसँगै उनीहरुके चर्चा सुरु भएको छ । तीमध्ये १ जनाले २० वैशाखमा वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी घोषितसँगै २ लाख नगद पुरस्कार जित्ने छन् ।
आफू मनोनयनमा परेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नवीनले भने, ‘दुःख गरेमा फल अवश्य पाइने रहेछ । मेरो लक्ष्य अझै ओलम्पिकमा सहभागी हुनु हो ।’ त्यसैले उनी यतिखेर ललितपुरमा तालिम गरिरहेका छन् । बिहानीको समय राष्ट्रिय टिमसँग तालिममा व्यस्त उनी दिउँसो बालाजु कराते डो एकाडेमीमा आबद्ध छन् । बालाजुमा उनी २०६६ देखि नै आबद्ध छन् । उनलाई ध्रुवविक्रम मल्लले कराते सिकाएका हुन् २०६५ सालदेखि ।
सन् २०१४ मा सम्पन्न साउथ एशियन क्याडेट/ जुनियर तथा सिनियर कराते च्याम्पियनसीपमा उनी ६८ केजी तौल समूहमा प्रथम हुन सफल भएका थिए । उनले भाग लिएका एक दर्जन बढी विभिन्न प्रतियोगितामा कुनै न कुनै पदक जित्दै आएका छन् । सन् २०१० मा काठमाडौंमा भएको कराते प्रतियोगितामा उनले स्वर्ण जितेका थिए ।
सन् २००८ देखि यस खेलमा आबद्ध उनको जन्म लमजुङको दुराडाँडा (हाल सुन्दरबजार) मा भएको हो । बावु गोविन्दराज खनियाँ र आमा निर्मला खनियाँका २ सुपुत्रमा उनी कान्छा हुन् । सर्वोदय मावि पढ्दाताका दाइहरुले टेबलटेनिस खेलेको देखेर नजानिँदो पारामा यसप्रति उनमा मोह जागेको बताउँछन् । पछि उनको प्रतिभा फुल्ने अवसर काठमाडौंको सिद्धार्थ वनस्थलीमा पुगेर भयो । त्यहाँ उनलाई प्रशिक्षक सुरेन्द्र सुवालले तालिम दिए । बीबीएस उत्तीर्ण विनेश खेलकै सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका छन् । सन् २०१७ मा बंगलादेशमा आयोजित साउथ एशियन क्लबमा रजत पदक जितेर देशको नाम चम्काएका थिए । यस्तै सन् २०१८ मा मलेसियामा भएको १३ औं युआईटिएम इन्टरनेशनल स्पोर्टस् फेस्टामा उनले गोल्ड मेडल जित्न सफल भए । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले स्वर्ण (मेन्स डबल्स), रजत (मिक्स डबल्स्) र कास्य (मेन्स् टिम) जितेका हुन् ।
राष्ट्रिय करिब ३ दर्जन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका झन्डै एक दर्जन प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् । कोभिड–१९ का कारण खेल क्षेत्रमा प्रभाव परेको बताउने उनी हाल काठमाडौं लैनचौरस्थित कभर्डहलमा आफूभन्दा सानालाई प्रशिक्षण दिन्छन् । प्रहरी सेवामा उनी २०७३ सालदेखि आबद्ध भएका हुन् ।
सुमन अर्याल नवलपुरको दुम्कीवास निवासी हुन् । सानैदेखि फुटबलप्रेमी उनको सहभागिता यु–१६ साफ च्याम्पियनसीपबाट भयो । ५ वर्षअघि भएको सो प्रतियोगितामा क्वार्टरफाइनलसम्म नेपाल पुग्न सकेको थियो । १३ औं सागमा यु–२३ मा नेपाललाई स्वर्ण दिलाउन उनको पनि योगदान छ ।
उनले एन्फामै तालिम लिएका हुन् । ४ वर्षदेखि उनी नेपाल आर्मीमा आबद्ध छन् । आर्मी टिमबाट आहारारा गोल्डकप खेल्न यी डिफेन्डर पोखरा रंगशाला समेत आएका थिए । त्यसबेला आर्मीले फाइनल यात्रा तय गरेको उनको स्मरण छ । सुमन भन्छन्, ‘पहिलेको तुलनामा अहिले खेल क्षेत्रमा लाग्नेलाई राम्रो अवसर छ । खेलाडीलाई अझै राम्रो सुविधा दिइयो भने आगामी दिनमा राम्रो गर्न सक्छन् ।’
काठमाडौं । बालरोग विशेषज्ञले ‘अबको कोरोना जोखिममा बालबालिका रहेको’ भन्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सचेत गराएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १५...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले बढेको छ । न्यून तलब भत्ताबाट रासन पानीमा समस्या हुँदै आएको...
चीन एक्लिनै लागेकै हो त ?
विजय नेपाल - September 17, 2021